août 2019 – Trinitera Malagasy
23 août 2019 Njara Pascal Comments 0 Comment
Fanambaràna 21, 9-14 – Salamo 144 – Md Joany 1, 45-51 – I Bartelemy (Zanaky ny bainga nivadika) no heverin’ny mpandinika maro ho ilay Natanaely (fanomezan’Andriamanitra). Misterin’ny finoana ihany no fonosin’izany anarana izany raha izay no izy, satria ilay fisasaran’ny olombelona hamadika ny bainga no nampamokarin’Andriamanitra ho tonga apostoly, haneho ny voninahiny eran’ny tany…
Ezekiela 43, 1-7/Salamo 84 – Bokin’i Rota 2, 1-17/Salamo 127 – Md Matio 23, 1-12 — Aza miantso olona ety an-tany hoe “mompera”, ho rainareo, fa iray ihany ny Rainareo dia izay any an-danitra. Aza mety atao hoe “maître” fa iray ihany no mpampianatra anareo dia i Kristy. Ny vahoaka sy ny mpianany no…
22 août 2019 Njara Pascal Comments 0 Comment
Ezekiela 37, 1-14/Salamo 106 – Bokin’i Rota 1, 1-22/Salamo 145 – Md Matio 22, 34-40 Rehefa tsy nahomby tamin’ny fandrika nataony ny farisianina, nanontany an’i Jesoa raha toa ka tokony hatao ny mandoha hetra amin’i Sezara na tsia (Mt 22, 15-22) ka novaliany mba hanome an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra, ka ny vola misy ny endrik’i…
Ezekiela 36, 23-28/Salamo 50 Mpitsara 11, 29-39a/Salamo 39 Md Matio 22, 1-14 Ry sakaiza, nahoana ianao no miditra eto nefa tsy miankanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady? Maimaim-poana ny fiantsoana, ny rehetra no antsoina ka nahoana indray ary no hilàna vaniny izay miditra ao? Tsara ho fantatra aloha fa tsy araka ny fombantsika ny fomba…
21 août 2019 Njara Pascal Comments 0 Comment
Ezekiela 34, 1-11/Salamo 22, 1-6Mpitsara 9, 6-15/Salamo 20Md Matio 20, 1-16a Inona ny valisoa ho azonay nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao? Hahazo ny denie iray nifanarahana ianao. Denie iray izay ampy hahasambatra anao sy ny ankohonanao. Ny mahagaga anefa dia ny nanomezan’ilay tompom-boaloboka karama mitovy ho an’ireo izay niasa adiny iray monja,…
18 août 2019 Njara Pascal Comments 0 Comment
Tolona ambony vatolampy ny fiainana,izay manao tan-tsy vinitra no vaky loha. Jeremia 38, 4-10/ Salamo 39Hebrio 12, 1-4Lioka 12, 49-53 “Tonga hanipy afo ety an-tany aho, ka akory ny faniriako mba hirehetan’izany sahady!” Izay no anombohan’i Jesoa hilazana amintsika ny iraka nahatongavany : ny mission (iraka) amin’ny maha-Kristy (voahosotra) azy : hanipy afo… Mampahatsiaro antsika…
Talata faharoa mandavantaona
8 desambra Alahady Batemy Fianakaviana Fiaviana Immaculée innocents Jesoa Joany Marka Martiry Masina Maria Noely Toriteny tsodrano
Archives Sélectionner un mois janvier 2020 (19) décembre 2019 (38) septembre 2019 (1) août 2019 (13)
Talata faharoa mandavantaona 20 janvier 2020